The Irrawaddy's Blog: အတန်းပညာမှာ မထူးချွန်ပေမယ့် အောင်မြင်ထင်ရှားသူ တချို့အကြောင်း(၂)
အတန်းပညာမှာ မထူးချွန်ပေမယ့် အောင်မြင်ထင်ရှားသူ တချို့အကြောင်း(၂)
“အောင်မြင်သူ” ဆိုတာ ဘယ်လို လူကို ခေါ်ပါသလဲ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အောင်မြင်ချင်သူ ဖြစ်ချင်ပေမယ့် အောင်မြင်ခြင်း ဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ်အကောက်လွဲနေရင် အောင်မြင်လား၊ အောင်မြင်မှု မရှိသူလား ဆိုတာ သေချာခံယူဖို့ ခက်နေပါလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်သူ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းပြောပြပါရစေ။
အောင်မြင်သူ အတွက် အချက် ၅ ချက်နဲ့ ပြည့်စုံရမှာပါ။ ပထမ အချက်က ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ ကိုယ်လိုလားရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဟာ အောင်မြင်ခြင်း တမျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ် မလုပ်ချင်တာကို မလုပ်ဘဲ နေနိုင်တာလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။
ဒုတိယ အချက်က ကိုယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကိုယ်တိုင်လည်း ပျော်မွေ့ နေနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် မပျော်မွေ့ဘဲ လုပ်ကိုင်နေရသူဟာ အောင်မြင်သူ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
တတိယ အချက်က ကိုယ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်တာကို အများက အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်နေရပါမယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်လုပ်ရပ် ကိုယ့်ပြုမူချက်က အများက အသိအမှတ်မပြု၊ အများအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ မဖြစ်ဘူးဆိုရင် အောင်မြင်သူလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေကို ကြည့်ပါ။ သူတို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အများက ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းသူ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိပါသလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာသာမက ကမ္ဘာက လေးစား အသိအမှတ်ပြုရတဲ့ ခေါင်းဆောင် မဟုတ်လား။
စတုတ္ထ အချက်က ကိုယ်လုပ်ကိုင်ချင်ရာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းက ထိုက်သင့်တဲ့ ၀င်ငွေနဲ့လည်း ပြည့်စုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုက်သင့်တဲ့ ၀င်ငွေ မရဘဲ ဘ၀ တလျှောက်လုံး မပြည့်မစုံ နေထိုင်သွားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တွေ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ပဉ္စမ အချက်က ကိုယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် တခြား သူတွေကိုလည်း အားပေးမြှင့်တင်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ ဒါဟာ အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ အချက် ၅ ချက်ပါ။ ဒီ အချက်တွေဟာ အောင်မြင်သူတွေလို့ ပြောဆို သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ ယေဘုယျ အချက် တချို့ပါ။ အတန်းပညာ အောင်မြင်သူ တွေလည်း အောင်မြင်သူ ဖြစ်နိုင်ပြီး အတန်းပညာ မတတ်မြောက် မသင်ယူခဲ့သူတွေဟာ အောင်မြင်သူ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အထက်ပါ အချက်တွေက ပြဆိုပါတယ်။
အခုဆက်ပြီး ပြောပြမှာက ပညာရေးမှာ (ကျောင်းသင်ပညာရေးမှာ) မထူးချွန်ပေမယ့် အောင်မြင်သူတွေလို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးရဲ့ ဘ၀ ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းနဲ့ သင်ကြားသင်ယူခဲ့တဲ့ ပညာရပ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းထက် ၀ါသနာပါရာ၊ စိတ်ဝင်စားရာ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်တာကြောင့် အောင်မြင်သူ တဦးရဲ့ အကြောင်းပါ။
Will Smith (၀ီလ်ဆမစ်သ်)
photo - deadline.com
Men In Black (MIB) လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် သိပ္ပံဇာတ်ကားမှာ အဓိက သရုပ်ဆောင် အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် Will Smith ကို သတိပြုမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ I, Robot ဇာတ်ကားများမှာ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။ သူရဲ့ သားငယ် Jaden ပါဝင်တဲ့ After Earth ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကလည်း အောင်မြင်ထင်ရှားပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးနေဆဲလို့ သိရပါတယ်။ Will Smith ရဲ့ အမည်ရင်းက Willard Carroll Smith, Jr. ပါ။ သူ့ကို ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၅ မှာ၊ ဖခင် Willard Carroll Smith Sr. နဲ့ မိခင် Caroline Bright တို့က မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ စတင်အောင်မြင်လာတာက ၁၉၈၅ ခုနှစ်က စပြီး ယနေ့ကာလ အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်က www.willsmith.com ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ အမေရိကန် ဇာတ်မြူးဇာတ်ကားတွေ၊ ဒရာမာကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ လူမည်း တဦးပါ။ ပြီးတော့ ထုတ်လုပ်သူ၊ ရက်ပါ စသဖြင့် ထင်ရှားတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဂီတတွေကို ဖန်တီးတင်ပြနိုင်ခဲ့သူပါ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ တော့ News Week မဂ္ဂဇင်းကြီးက ဟောလီးဝုဒ်ရဲ့ သြဇာအကြီးဆုံးလို့ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု ၄ ကြိမ်၊ အကယ်ဒီဆု ၂ ကြိမ်နဲ့ အနုပညာလောကရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ဂရမ်မီဆု ၄ ကြိမ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Dolph Lundgren (ဒေါ့လ်ဖ်လန်ဂရင်း)
photo - img-hd.com
“အာနိုးက ကျနော် အားကျခဲ့ရတဲ့ စံပြ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ သို့ပေမယ့် ကျနော် သရုပ်ဆောင် ဖြစ်လာတော့ သူ့ကို ဒီလောက်ကြီး အားကျတာ မရှိတော့ပါဘူး။ ကျနော်က ရှောင်ကွန်နရီ၊ မဲလ်ဂစ်ဘ်ဆင် နဲ့ ဟယ်ရီဆင်ဖို့ဒ် တို့ကို ပိုပြီး နှစ်သက်လာ တယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အားလုံးဟာ တကယ့်ကို လေးစားစရာ သရုပ်ဆောင်တွေပါ” လို့ ပြောတဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံသား ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒေါ့လ်ဖ်လန်ဂရင်း (Dolph Lundgren) အကြောင်း ဆက်လက်တင်ပြဦးမယ်။
သူ့ရဲ့ အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တချို့က ဗန်ဒိန်းနဲ့ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Universal Soldier ၊ The Sweeper ၊ The Expendables အပါအ၀င် အခြား အက်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ ဘ၀ ဖြစ်စဉ်က စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
သူ့ကို ဆွီဒင်နိုင်ငံ စတော့ဟုမ်းမြို့မှာ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ငယ်နာမည်က Hans Lundgren ဖြစ်ပြီး သူ့အရပ်က ၆ ပေနဲ့ ၅ လက်မခွဲ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ သူဟာ အသက် ၁၃ နှစ်အထိ အဲဒီ မြို့မှာ နေထိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် အဖိုးအဖွားများရှိရာ Nyland, Ångermanland, Sweden ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူ ပထမဦးဆုံး စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဂီတနဲ့ ရသ အနုပညာအစား သူဟာ ဖခင်ရဲ့ ခြေရာနင်းနိုင်ဖို့ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို ရွေးချယ် တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူဟာ ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိ Royal Institute of Technology မှာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး Master ဘွဲ့ကိုတော့ University of Sydney မှ ၁၉၈၂ မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် Fulbright ပညာသင်ဆု ရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ၁၉၉၅ မှာတော့ Hidden Assasin ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ အစမ်းပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရာကနေ အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖြစ်လာရသူပါ။
အလွန်အင်မတန် ရှက်ရွံ့တတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ခံယူချက်ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
I've just tried to play my own game and treat everybody with respect. No matter who they are. That is something I'm proud of and I feel it will always pay off.
“ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် ပြိုင်နေရတဲ့ ကစားပွဲကို ဆင်နွှဲနေပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းကို လေးစားမှု အပြည့်နဲ့ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပြီး အကျိုးအမြတ် ငွေကြေး တစုံတရာ ရတာကို ကျနော် ဂုဏ်ယူပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
အခု တင်ပြခဲ့တာက အောင်မြင်မှုရဲ့ သဘော၊ ကျေနပ် ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ သဘောကို တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာတတ်ခြင်း၊ ပညာမတတ်ခြင်းထက် ကိုယ့်ကျေနပ်မှုနဲ့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုကို ကိုယ့်ဘ၀ကို အားပေးမြှင့်တင်နိုင်ပါသလား၊ ကိုယ်တိုင်ရော ပျော်ရွှင်ပါရဲ့လား ဆိုတာ တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in: Naing Swann , ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
Writer is forgetting about what he was writing. The title and the story were totally wrong. Make sure you pick correct person or source for the title you are writing.